"Lubbuudhaan bakka kanaa bahuun barbaada" - miidhamtoota walitti bu'iinsa Beenishaangul - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Beenishaangul keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 8 ajjeefaman
Kamisa darbe Onkoloolessa 16 Naannoo Beenishaangul, Godina Kamaashaa ganda Haroo Dhedheessaa jedhamu keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuu namaafi qabeenya irra badiin gahee jira.
Hojiif gara naannichaa imalanii jireenya isaanii achumatti kan bu'uureffatan dhalattoota naannoo Amaaraa fi sab-lammiiwwan Gumuz gidduutti yeroo gara garaa walitti bu'iinsi uumamaa akka ture kan himan namoonni dubbifne kunneen, gama lamaaniinuu lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Dhalattoonni Oromoo walitti bu'iinsa kanaan lubbuu dhabanis jiru jedhu.
Bara 1997 hojii barbaacha garas imalee, ganda Haroo Dhedheessaa, gooxii Danaabaa keessa jiraachuu kan eegale Baayih Tafarraa, walitti bu'iinsa uumameen namootni torba ajeeffamuu ija koon argeera jedha.
Namoota ajjeefaman keessas 6 dhalattoota Amaaraa, tokko ammo dhalataa Gumuz ta'uu nutti hime.
Wayita ammaa ijoollee isaa ganna 8 fi 11 reebicha hamaa irratti raawwatameen miidhaman, hospitaala Naqamteetti yaalchisaa kan jiru Baayih, " ergan as dhufee booda dhalattoonni Amaaraa 2 fi isaan waliin kan hojjetan Oromoonni lama albeen waraanamanii ajjeefamuu namoonni achi jiran bilbilaanii natti himaniirus," jedha.
'Gara biyyaatti isin deebifna'
Waggoota lamaa as "gara biyya keessaniitti isin deebifna" dhaadannoon jedhu jiraattota naannichaa irraa dhagaahamaa akka tureefi kunis namoota naannoo biraatii dhufan irratti haleellaan akka raawwatamu sababa ta'uusaa hima.
Heerri mootummaa naannoo Beenishaangul, "uummattoota jeebantoota" jechuun beekamtii kan kenneef, Bartaa, Shinaashaa, Maa'oo fi Koomoo yoo ta'an uummattoota biro "warra bakka biraa dhufan" jedhaman waliin walitti bu'iinsi yoo uumamu kun kan jalqabaa miti.
Bara 2006 dhalattoonni Amaaraa haleellaa baqatanii gara Godina Lixa Gojjaam naannoo Finoota Salaam jedhamu buufatanii turan booddee gara naannichaatti akka deebifaman taasifamanii turan.
Itti gaafatamaan waajjira Komunikeeshini naannoo Beenishaangul obbo Mangistuun walitti bu'iinsi uumame waldhabdee namoota dhunfaati jedhanis, jiraattoonni garuu eenyummaa isaaniin adda baafamanii haleellaan irratti raawwatamuu dubbatu.
Qeesiin mana amantaa Ortodoksii gandichatti argamuu BBC'n dubbise tokko, osoo ilma isaanii waliin gara hojii deemaa jiranii garmalee reebamuu isaanii dubbatu.
"Ijoolleen keenya asitti waan dhalatanii guddataniif, afaan Gumuz haalaan dubbatu. Kanammoo isaan hin jaalatan, afaan keenya nu jalaa hattan nuun jedhu" jechuun haleellichi ijoollee irratti akka hammaatu himan.
Ilmi isaanii garmalee reebamee amma hospitaalatti yaalamaa akka jirus nutti himan.
Qabeenyaa waggoota lamaan darban horate hunda saamamuu isaa kan dubbatu Baayih, garas deebi'ee jireenya itti fufuuf fedhii hin qabu.
"Wanta na hafte funaannadhee, lubbuun bakka kanaa bahuun barbaada," jedha.
Dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahun, barreeffama ganama kana fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin, lubbuun namoota saddetii darbuu fi manneen hedduun gubachuu mirkaneessanii jiru.
Angawoonni mootummaa naannoo Amaaraa garas imaluun dhimmicha hordofaa akka jiranis eeraniiru.